Hampton Hacienda Hamba uye eDolophini !!!
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguBrenda
Wamkelekile eHampton Hacienda, apho abakhweli beebhayisekile, abakhweli, imiphefumlo yabalobi okanye abo bangathanda ukufumana indawo yokuphumla, baya kuhlala beziva besekhaya. Igumbi lethu lokulala eli-2, i-1-bath hacienda ifumaneka kwiibhloko ezimbalwa ukusuka kwiSithili soBugcisa saseLumberyard kufutshane nedolophu yaseBrevard. Sinikezela ikofu kunye neti.
Sinikezela ngendawo yokuhamba kuzo zonke iindawo ezinomtsalane kwidolophu enomtsalane yaseBrevard. Abantwana basoloko bamkelekile, njengoko sithanda ukuhamba kunye neyethu! Ivumba alinavumba, akutshayi, sinobubele kwizilwanyana zasekhaya!!
I-Master Bedroom: ibhedi yenkosi (inokohlulwa ibe ngabantu abangatshatanga aba-2) Igumbi lokulala 2: ibhedi elala bhedi; iwele XL ibhedi (phezulu) queen bed (ezantsi).
Xa ungena, ubuliswa yiveranda yethu esiyithandayo. Igumbi lokuhlala, elinendawo yomlilo yegesi yenza ukuba ibe yindawo efanelekileyo yokonwabela ixesha losapho. Ikhitshi enefenitshala epheleleyo ibandakanya izixhobo zentsimbi engatyiwayo, ibha yekofu, imicrowave kunye neoveni. Iimbiza, iipani kunye nesitya sokutya sinikezelwe.
Indawo yokuhlala ixhotyiswe ngeWi-Fi kwaye inomabonakude wescreen esisicaba, amashiti akumgangatho ophezulu kunye noomatrasi benkumbulo entsha kraca kuzo zonke iibhedi. Indlu yangasese yesitayela sehotele, iitawuli zokuhlambela ezisemgangathweni, isomisi seenwele, intsimbi. Iiyure ezingama-24 zokungena ziyafumaneka. Iindwendwe zinokufikelela ngokupheleleyo ukonwabela i-hacienda.
Eli khaya lilawulwa ngokobuchwephesha kwaye licociwe ukunika inkonzo ebalaseleyo kuzo zonke iindwendwe zethu. Yicinge nje ngamava afana nehotele kwikhaya eliphangaleleyo elinefenitshala. Ukuba ufuna nantoni na eyongezelelweyo ngexesha lokuhlala kwakho, silapha ukunceda!
IHampton Hacienda ikumda wedolophu encinci, ukuze ukonwabele ukuzola emahlathini. Funda incwadi, jonga i-squirrels ezimhlophe ezindwendwela ipropathi, usele iglasi yewayini, ugcobe isidlo sakho sangokuhlwa, okanye uqhotse imarshmallows ngelixa ufudumala ecaleni komngxuma womlilo ovuthayo emva kwendlu.
Siyazithanda izilwanyana zasekhaya (izilwanyana zasekhaya ezibini ngokubhukisha) nangona kunjalo kufuneka ube nomntu omdala omnye ubuncinane eHacienda ngelixa izilwanyana zasekhaya zikwindawo okanye izilwanyana zasekhaya kufuneka zihlale kwikhreyithi. Siyazithanda izinja kwaye sikwakhathalele iindwendwe zethu, nceda ugcine izinja ekunyukeni kuyo nayiphi na ifenitshala eHacienda. Kukho umrhumo wesilwanyana ongabuyiswayo we-100 yeedola. Ukuba undwendwe aluhlaziyi umamkeli malunga nokuzisa izilwanyana zasekhaya ngaphambi kokungena eyongezelelweyo i-$100 iya kuhlawuliswa ngokuzenzekelayo ngaphandle komrhumo wesilwanyana sasekhaya.
I-Hampton Hacienda kuphela iibhloko ezimbalwa kwiSithili soBugcisa saseBrevard Lumberyard, apho unokumamela khona umculo ophilayo e-185 King Street kunye neNoblebrau Brewery yethu entsha enezihlalo zangaphandle ezothusayo, zibonelela ngezinto ezincinci zokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa okumangalisayo, ukonwabela ibhiya eSquatch. okanye utye eMagpie Meat & Three okanye Vescovo cuisine ecolekileyo, indawo yogcino ecetyiswayo kule yokugqibela. Iibhloko ezimbalwa ezithe qelele ziindawo zokutyela eBrevard edolophini, iigalari ezininzi zobugcisa, iindawo ezithengisa utywala, iivenkile zekofu, iindawo zokubhaka kunye nethiyetha yemovie.
Igalari ye-Hean engaphaya kwe-6 yezigidi zeedola zethu kwiThala leeNcwadi loLuntu linobugcisa obuhle kunye neziganeko ezininzi kwithala leencwadi labantwana bayo yonke iminyaka, iimuvi, iikonsathi. Nceda undwendwele iinkcukacha zeziganeko ngexesha lokuhlala kwakho.
Iziko loMculo leBrevard likumgama ongaphantsi kweemayile. Unokunyuka, ukhwele ibhayisekile okanye uqhube usuka eHampton Hacienda kwaye wonwabele abafundi bethu abanetalente kunye nezinye iimvumi ezaziwayo-kakuhle ukusuka ngoJuni-Agasti.
IFranklin Park kunye nedama lokuqubha likawonke-wonke ngumgama onokuhanjwa ukusuka edolophini.
Kungaphantsi kwemizuzu eyi-10 yokuqhuba ukuya ekungeneni kwiHlathi leSizwe lasePisga, apho unokufumana khona ukuloba i-trout ekumgangatho wehlabathi, ukukhwela ibhayisekile yeentaba, iindlela zokuhamba kunye neengxangxasi ezintle. Unokude udiphe komnye wemingxuma yayo yokuqubha emininzi. Ungasathethi ke ngevenkile yangaphandle yeHUB, iDolly's Ice Cream Shop, iHog Wild BBQ, iEcusta Brewery nokunye ekungeneni.
Ihlathi lasePisga liqulethe i-Cradle yezamahlathi yeNkonzo yePaki yeSizwe. Iziko labo labatyeleli libonelela ngemiboniso esebenzisanayo, iifilimu, kunye neziganeko ezikhethekileyo, kunye neendlela ezimbini zokutolika. Iimayile ezininzi ukuya phambili ungakonwabela iivistas ezintle ecaleni kweBlue Ridge Parkway kwaye utye ePisgah Inn, enembonakalo entle yeentaba.
Ukuhamba ngemizuzu engama-20 okumnandi kuya kukuthatha ukuya eDupont State Forest ukuze unyuke intaba okanye uhambe ngebhayisekile entabeni kwezinye zeekhilomitha ezingama-80. Phakathi kweengxangxasi ezininzi zeHlathi, ungaphoswa ziiNgxangxasi eziNtathu, ingxangxasi ephakame kangangeemitha ezili-150 ezineengxangxasi ezintathu, okanye iiNgxangxasi eziPhakamileyo, iingxangxasi eziphakamileyo eziziimitha ezili-120 ezithweswe isithsaba sebhulorho egqunyiweyo.
Imizuzu engamashumi amathathu kude yiSierra Nevada Taproom, enezitya zasefama ukuya kwitafile kunye neveranda emangalisayo enika umculo ophilayo. Indawo ethengisa utywala ibiyeyosapho ukusukela ngeminyaka yoo-1960 kwaye ngoku inegama lesizwe. Ungabhukisha ukhenketho lwasimahla kwesi sixhobo sinomtsalane kwi-intanethi.
Kwelinye icala, kukuhamba ngemizuzu engama-45 ukuya kwi-Flat Rock Playhouse, apho unokonwabela imidlalo ye-Broadway kwinqanaba lethiyetha yaseNorth Carolina.
Kumalunga neyure yokuhamba ukuya e-Asheville kunye neSithili sayo soBugcisa boMlambo, iGrove Park Inn eyimbali, kunye neBiltmore Estate eyaziwayo.
4.49 · Izimvo eziyi-51
I-Hampton Hacienda ikwindawo yenguqu kwisitalato esifileyo. Kufuphi kakhulu kwiindlela zebhayisekile njengeBracken Mountain kunye neDepot entsha kuloliwe.
Love the nature, explore, camp, hike and go to the woods as much as I can. There is no better place to do it than in WNC where I call home for over 10 years. My family and I live i…
Ukuba unemibuzo ngaphambi okanye ngexesha lohambo lwakho, siya kukuvuyela ukukunceda kwaye sincede kuwo nawuphi na umba onokuthi uvele.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Brevard